के उमेरले प्रजनन क्षमतामा प्रभाव पार्छ? कुन उमेरमा गर्भधारण गर्नु उचित! - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
के उमेरले प्रजनन क्षमतामा प्रभाव पार्छ? कुन उमेरमा गर्भधारण गर्नु उचित!
पुरुषको तुलनामा महिलाको उमेरले प्रजनन क्षमतामा प्रभाव पार्छ र?
प्रजनन क्षमताका लागि उमेरको कुरा गर्ने हो भने यसमा महिला र पुरुषमा भिन्न भिन्नै प्रभाव हुनेगर्छ । महिलाको जन्म निश्चित अन्डको संख्यासँग हुन्छ, जुन उमेर बढ्दै जाँदा कम हुँदै जान्छ । एउटा उमेर चरणमा पुगिसकेपछि उक्त अण्ड सकिन्छ । र, त्यसपछि उक्त अन्ड बन्ने प्रक्रिया नै रोकिन्छ । जबकि पुरुषको शरीरमा विर्य बन्ने क्रम जीवनभर कायम रहन्छ । यस हिसाबले के भन्न सकिन्छ भने महिलाको हकमा गर्भधारण गर्नका लागि एक सीमित उमेर हुन्छ । जबकि पुरुष ६०–७० वर्षको उमेरमा पनि पिता बन्न सक्छन् । अब जानौं, महिलामा प्रजनन क्षमता कुन उमेरमा बढी हुन्छ रु
कोरोना कहर : “यदि मैले सेक्स गरिन भने म भोकले मर्नेछु”
के मदिराले यौन जीवनलाई रोमाञ्चक बनाउँछ ? यस्तो छ वास्तविकता
गर्भधारणप्रजनन क्षमतायौनका कुरा